kwemboni yethu usezuze isitifiketi ICTI International Toy Association, ISO9001: 2008 ukuphathwa izinga isitifiketi uhlelo, EU BSCI aphebeze isitifiketi nesibopho emphakathini futhi isitifiketi FSC. Zethu amabanga mkhiqizo zihlanganisa amathoyisi wokufunda, unodoli izindlu, isitimela amasethi, puzzle ngokhuni, nezinsimbi zomculo, zokhuni njll Ukuhola njalo umfana & intombazane elimnandi, ujabule, ebuntwaneni umxhwele izifiso zethu engcono.
Zonke imikhiqizo yethu ekhiqizwa ne izinga alandisa ukunakekela imininingwane ukuhlangabezana nezimfuno ikhasimende lethu. Singabantu evulekile ukwenza OEM imikhiqizo ngokusho design amakhasimende '. Nge nakho okucebisayo futhi ulwazi professional on amathoyizi & yezandla, sizokunikeza isiphakamiso esihle, okuyinto enze imikhiqizo yakho iphephe ukuphumelela kuzo zonke izivivinyo ezidingekayo futhi ube yokuthengisa ezinhle emakethe.